Bitcoin Scrypt စျေး - အွန်လိုင်း BTCS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Bitcoin Scrypt (BTCS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Bitcoin Scrypt (BTCS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Bitcoin Scrypt ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $566 973.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Bitcoin Scrypt တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Bitcoin Scrypt များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Bitcoin ScryptBTCS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0248Bitcoin ScryptBTCS သို့ ယူရိုEUR€0.0212Bitcoin ScryptBTCS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.019Bitcoin ScryptBTCS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0228Bitcoin ScryptBTCS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.224Bitcoin ScryptBTCS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.158Bitcoin ScryptBTCS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.554Bitcoin ScryptBTCS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0932Bitcoin ScryptBTCS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0331Bitcoin ScryptBTCS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0348Bitcoin ScryptBTCS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.557Bitcoin ScryptBTCS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.192Bitcoin ScryptBTCS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.133Bitcoin ScryptBTCS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.85Bitcoin ScryptBTCS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.2Bitcoin ScryptBTCS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0341Bitcoin ScryptBTCS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0379Bitcoin ScryptBTCS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.772Bitcoin ScryptBTCS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.172Bitcoin ScryptBTCS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.65Bitcoin ScryptBTCS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩29.41Bitcoin ScryptBTCS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦9.63Bitcoin ScryptBTCS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.82Bitcoin ScryptBTCS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.687
Bitcoin ScryptBTCS သို့ BitcoinBTC0.000002 Bitcoin ScryptBTCS သို့ EthereumETH0.00007 Bitcoin ScryptBTCS သို့ LitecoinLTC0.000464 Bitcoin ScryptBTCS သို့ DigitalCashDASH0.000288 Bitcoin ScryptBTCS သို့ MoneroXMR0.000288 Bitcoin ScryptBTCS သို့ NxtNXT2.01 Bitcoin ScryptBTCS သို့ Ethereum ClassicETC0.00371 Bitcoin ScryptBTCS သို့ DogecoinDOGE7.46 Bitcoin ScryptBTCS သို့ ZCashZEC0.000318 Bitcoin ScryptBTCS သို့ BitsharesBTS0.965 Bitcoin ScryptBTCS သို့ DigiByteDGB0.828 Bitcoin ScryptBTCS သို့ RippleXRP0.0888 Bitcoin ScryptBTCS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000872 Bitcoin ScryptBTCS သို့ PeerCoinPPC0.0834 Bitcoin ScryptBTCS သို့ CraigsCoinCRAIG11.53 Bitcoin ScryptBTCS သို့ BitstakeXBS1.08 Bitcoin ScryptBTCS သို့ PayCoinXPY0.442 Bitcoin ScryptBTCS သို့ ProsperCoinPRC3.17 Bitcoin ScryptBTCS သို့ YbCoinYBC0.00001 Bitcoin ScryptBTCS သို့ DarkKushDANK8.11 Bitcoin ScryptBTCS သို့ GiveCoinGIVE54.76 Bitcoin ScryptBTCS သို့ KoboCoinKOBO5.76 Bitcoin ScryptBTCS သို့ DarkTokenDT0.0228 Bitcoin ScryptBTCS သို့ CETUS CoinCETI73.01
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 03:45:03 +0000.